आइतबार मार्च 7, 2021 |
आइतबार मार्च 7, 2021
विषय — मानिस
वर्ण पाठ: 1 कोरिन्थी 15 : 57
“"हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिंदछौं उहाँले हामीलाई विजय दिनु हुन्छ।"”
2 कोरिन्थी4: 8,9• रोमी 8 : 31, 35, 37-39
35 ख्रीष्टको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने कुनै थोक छ? छैन। के दुःखले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्नसक्छ? सक्दैन! के कठिनाई वा खेदाइले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्नसक्छ? सक्दैन। के अनिकाल वा नागोंपनले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्नसक्छ? अहँ। के कुनै आपद वा मृत्युले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ?
38 हो, म निश्चिन्त छु कि कुनै चीजले पनि हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट अलग पार्न सक्तैन न मृत्यु वा जीवनले न स्वर्गदूतहरू वा शासन गर्ने आत्माहरूले न त कुनै वर्तमानका वा भविष्यका कुराले।
39 न त कुनै माथिका वा तलका शक्तिले न त सारा संसारको कुनै अरू सिर्जित कुराले हाम्रो परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्नेछ जो हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशूमा छ।
1. हितोपदेश 11 :3(तिर :)
3 ईमानदार मानिसहरूलाई आफ्नो इमान्दारीले पथ-प्रदर्शन गराउँछ।
2. फिलिप्पी2: 14, 15
3. फिलिप्पी4: 11 (को लागी)-13
11 … को लागी मैले त आफूसित जो छ त्यसैमा सन्तोष गर्न प्रशिक्षण लिएको छु।
12 म जान्दछु गरीब हुँदा कसरी बस्नु पर्छ अनि जब मेरोमा प्रशस्त हुँदा कसरी बस्नु पर्छ अनि जब मेरोमा प्रशस्त हुँदा पनि म जान्दछु। सबै परिस्थितिसँग कसरी मेल खाने त्यो रहस्य मैले सिकेकोछु। भर पेट खानु पाउँदा र आधा पेट बस्नु पर्दा कसरी जीवन बिताउनु पर्छ मैले सिकेको छु। चाहिएको कुरा सबै पाउँदा पनि, केही नपाउँदा पनि खुशी हुनु मैले सिकेको छु।
4. उत्पत्ति 37:2(यूसुफ) (तिर ;), 3, 4, 24 (तिर :), 28 (तिर :)
2 यूसुफ सत्र वर्षको युवक थियो। उसको काम भेडा-बाख्रा हेरचाह गर्नु थियो।
28 जब ती मिद्यानी व्यापारीहरू नजिक आए, तिनीहरूले यूसुफलाई कूवाबाट बाहिर निकाले। तिनीहरूले यूसुफलाई बीसवटा चाँदीका टुक्रामा बेचे।
5. उत्पत्ति 39 : 1, 3, 7, 8 (तिर 1st ,), 12, 19 (जब)-20 (तिर 2nd ,), 21, 22
1 जुन व्यापारीले यूसुफलाई किन्यो उनले यूसुफलाई मिश्र देशमा लिएर गए। उनले यूसुफलाई फिरऊनको अगंरक्षकहरूको सेनापतिलाई बेचिदियो।
3 पोतीफरले थाहा पायो परमप्रभुले यूसुफलाई सहायता गर्नु भएको छ। उनले यो पनि थाहा पायो यूसुफले जे गर्छ त्यसमा उसलाई सफल पार्न परमप्रभुले सहायता गर्नु भएको हुन्छ।
7 केही समयपछि यूसुफको मालिककी पत्नीले उसलाई प्रेम गर्न थालीन्। एकदिन उनले भनिन्, “मसँग सुत्।”
8 तर यूसुफ मानेन।
12 उसका मालिककी पत्नीले यूसुफको लुगा समाती अनि उसलाई भनी, “तिमी मसित ओछ्यानमा आऊ।” तर यूसुफ त्यहाँबाट यति चाँडो भाग्यो कि उसको लुगा मालिककी पत्नीको हातमा नै रह्यो।
19 ...जति बेला यूसुफको मालिकले कथा सुने, तिनी साह्रै नै रिसाए।
20 पोतीफरले यूसुफलाई त्यही झ्यालखानामा राख्यो अनि यूसुफ त्यही बसिरह्यो।
21 तर परमप्रभु यूसुफसित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ संधै ऊसंग दयालु हुनुहुन्थ्यो।
22 उहाँले अरू कैदीहरूको प्रमुख यूसुफलाई बनाए अनि एक रक्षकबाट गरिनु पर्ने प्रत्येक कुरो तिनलाई गर्न लगाए।
6. उत्पत्ति 41 : 1 (तिर :), 14 (तिर :), 15, 16, 28-30 (तिर 1st ;), 33, 37-40
1 दुइवर्ष पछि फिरऊनले एउटा सपना देख्यो।
14 यसर्थ यूसुफलाई फिरऊनले झ्यालखानबाट झिकायो र अंग-रक्षकहरूले उसलाई लगत्तै झ्यालखानबाट ल्याए।
15 फिरऊनले यूसुफलाई भन्यो, “मैले थाहा पाएँ कसैले तिमीलाई आफ्नो सपना बताए तिमी त्यसको बारेमा व्याख्या दिन सक्छौ अरे। मैले पनि एउटा सपना देखेको छु अनि त्यस सपनाको विषयमा बताउन यहाँ कसैले ब्यख्या गर्न सकेनन्।”
16 यूसूफले उत्तर दिए,“म त ब्यारख्या दिन सक्दिनँ तर हुनसक्छ परमेश्वले तिमीलाई सपनाको बिषयमा बताउनु हुनेछ।“
28 यो ठीक मैले तिमीलाई भने जस्तै नै हो। परमेश्वरले फिरऊनलाई बताउनु भएको छ उहाँ के गर्नु हुँदैछ?
29 मिश्र देशमा सात वर्ष प्रचूर अन्न हुने छ।
30 तर त्यसपछि फेरि सात वर्ष अनिकाल लाग्ने छ।
33 यसैकारण, हे फिरऊन, तपाईंले यस्तो बुद्धिमान र ज्ञानी मानिस हेर्नुहोस् अनि उनलाई मिश्र देशको राज्यपाल बनाउनुहोस्।
37 फिरऊन र तिनका सबै पदाधिकारीहरूलाई यो योजना राम्रो लाग्यो।
38 त्यसपछि उनले तिनका सबै पदाधिकारीहरूलाई सोधे, “के परमेश्वरको आत्मा त्यो व्यक्तिभित्र रहेको कुनै व्यक्ति हामी भेट्न सक्छौ? सक्दैनौ?”
39 यसर्थ फिरऊनले यूसुफलाई भने, “जब परमेश्वरले तिमीलाई यी सबै कुराहरू बुझ्ने बनाउनु, भयो, यस ठाउँमा तिमी जस्तो ज्ञानी तथा बुद्धिमानी कोही पनि छैन।
40 तिमी नै एक जना हौ जो यस देशको राज्यपाल हुन सक्ने अनि मेरा सबै मानिसहरूले तिम्रो कुरा सुन्ने छन् तिमी जे भन्छौ, आज्ञा पालन गर्नेछन्। म मात्र एकजना व्यक्ति हुनेछु जो तिमी देखि माथि रहनेछु।”
7. उत्पत्ति 42 : 3,7(तिर 1st ,)
7 यूसुफले आफ्नो दाज्यू देखे।
8. उत्पत्ति 45 : 4, 5
4 यसर्थ यूसुफले आफ्ना दाज्यू-भाइहरूलाई फेरि भने, मकहाँ आऊ। म बिन्ती गर्छु, तिमीहरू मेरो नजिक आओ यसर्थ तिनीहरू यूसुफको नजिकमा गए। अनि उनले तिनीहरूलाई भने, “म तिमीहरूको भाइ हुँ। म त्यही भाइ हुँ जसलाई तिमीहरूले मिश्र देशमा कमारोको रूपमा बेचेका थियौ।
9. 1 पत्रुस2: 19-23
22 उनले पाप गरेनन्, अनि उनको मुखमा कुनै छलको कुरो पाइएन।
23 मानिसहरुले ख्रीष्ट प्रति नराम्रा कुराहरु भने, तर उहाँले तिनीहरुलाई नराम्रो भन्नु भएन। ख्रीष्टले यातना भोग्नु भयो तर उहाँले मानिसहरुलाई भय देखाउनु भएन। ख्रीष्टले आफूलाई परमेश्वरमा सुम्पनु भयो जसले सही न्याय गर्नुहुन्छ।
10. फिलिप्पी2: 12, 13
11. रोमी 8 : 28
मानिस: परमेश्वरको आध्यात्मिक विचार, व्यक्तिगत, सिद्ध, अनन्त।
भगवानले मानिसमा असीम बिचारलाई सदाको लागि विकास गर्दै, फराकिलो र असीमित आधारबाट माथि र माथि उचाल्नुहुन्छ।
असीम सिद्धान्तको असीम विचार र आध्यात्मिक व्यक्तित्वबाट झल्किन्छ, तर भौतिक तथाकथित इन्द्रियलाई कि त सिद्धान्त वा यसको विचारको कुनै मान्यता छैन। मानव क्षमताहरु बढाइएको छ र अनुपात मा सिद्ध छ किनकि मानवताले मानिस र ईश्वरको साँचो अवधारणालाई प्राप्त गर्दछ।
3. 307: 25 (को)-30
ईश्वरीय दिमाग मानवको आत्मा हो, र मानिसलाई सबै चीजहरूमाथि प्रभुत्व दिनुहुन्छ। मानिसलाई भौतिक आधारमा सृष्टि गरिएको थिएन, न त आत्माले बनाएका भौतिक नियमहरू पालन गर्न आग्रह गरियो; उसको प्रान्त आध्यात्मिक नियमहरूमा रहेको छ, मनको उच्च कानूनमा।
एक मान्छे को लागी मानीन्छ कि मानिसहरु परमेश्वरको समान छ मानिस मानिस असीम विचार मास्टर गर्न स्वतन्त्र सेट गर्दछ। यस विश्वासले मृत्युको ढोका बन्द गर्दछ, र यसले अमरत्वको लागि फराकिलो खोल्छ। आत्माको समझ र मान्यता अन्ततः आउनुपर्दछ, र हामी साथै ईश्वरीय सिद्धान्त को एक धारणा को माध्यम बाट भएको रहस्यहरु लाई सुल्झाउने हाम्रो समय सुधार गर्न सक्दछौं। वर्तमानमा हामी जान्दैनौं कि मान्छे के हो, तर जब हामी ईश्वरलाई प्रतिबिम्बित गर्छौं तब हामीले यो निश्चित रूपमा जान्न सक्दछौं।
मानिसको दासत्व वैध छैन। यो स्वतन्त्रता को आफ्नो विरासत मा प्रवेश जब यो बन्द हुन्छ, ईश्वरीय ईश्वरीय मा आफ्नो ईश्वर-प्रभुत्व। मोर्टलहरूले कुनै दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वरको नाममा आफ्नो स्वतन्त्रताको हक दिन्छन्। त्यसोभए ईश्वरीय विज्ञानको समझबाट उनीहरू आफ्नै शरीरहरू नियन्त्रण गर्नेछन्। उनीहरूको वर्तमान विश्वासलाई छोड्दै तिनीहरू आत्मिक वास्तविकताका रूपमा सामंजस्य पहिचान गर्नेछन् र भौतिक असमानताका रूपमा असहमति।
हामी ईश्वरको सृष्टि को प्रकृति र गुण जान्न सक्दैनौं नश्वर विश्वासको थोरैमा डुबाएर। हामीले हाम्रा अशक्त फडफडाहरूलाई उल्टाउनुपर्दछ - पदार्थ र जीवनको सत्यता पत्ता लगाउन हाम्रो प्रयास - र भौतिक इन्द्रियहरूको गवाहीभन्दा माथि उठ्नुपर्दछ, ईश्वरको अमर धारणा भन्दा माथि। यी स्पष्ट, उच्च विचारहरूले ईश्वरीय मान्छेलाई आफ्नो अस्तित्वको पूर्ण केन्द्र र परिधिमा पुग्न प्रेरित गर्दछ।
ईश्वरीय प्रेम आफ्नै विचारहरु लाई आशीर्वाद दिन्छ, र तिनीहरुको गुणा गर्न को लागी - उहाँको शक्ति प्रकट गर्न। माटो सम्म मानिस बनेको छैन। उसको जन्मसिद्ध अधिकार प्रभुत्व हो, अधीनताको होइन। उहाँ पृथ्वी र स्वर्गमा आस्थाका स्वामी हुनुहुन्छ - उहाँ आफैंले आफ्नो निर्माताको अधीनमा बस्नुहुन्छ। यो अस्तित्वको विज्ञान हो।
कुनै न कुनै रूपमा, ढिलो होस् वा चाँडो, सबै भौतिकता भन्दा उच्च हुनुपर्दछ, र दुःखकष्ट यस उचाईमा ईश्वरीय एजेन्ट हो। "परमेश्वरले प्रत्येक कुरामा तिनीहरूको भलाईको लागि गर्नुहुन्छ जसले उहाँलाई प्रेम गर्दछ," पवित्र शास्त्रको हुकुम हो।
चरण-देखि चरण उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूले त्यो फेला पार्नेछन् "परमेश्वर हाम्रो बलको भण्डार हुनुहुन्छ संकटको बेला उहाँबाट हामी सधैं सहयोग पाउन सक्छौं।"
"आफ्नै उद्धारको लागि काम गर्नुहोस्," i जीवन र प्रेमको माग, यो अन्तको लागि परमेश्वर तपाई संग काम गर्नुहुन्छ। "म नआएसम्म कब्जा गर्नुहोस्!" तपाइँको इनाम को लागी प्रतीक्षा गर्नुहोस्, र "राम्रो काम गर्दा थकित नहुनुहोस्।" यदि तपाईंको प्रयास डरलाग्दो परिस्थितिहरूले भरिएको छ, र तपाईंले कुनै पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएन भने, त्रुटिमा फिर्ता नजानुहोस्, वा दौडमा अल्छी बन्नु हुँदैन।
10. 254: 19 (को) -23
... मानव आत्म प्रचारित हुनु पर्छ। यो कार्य ईश्वरले हामीलाई आज मायालुपूर्वक स्वीकार्न, र व्यावहारिक भौतिक रूपमा यति छिटो त्याग्ने, र बाह्य र वास्तविक निर्धारण गर्ने आध्यात्मिक कार्य गर्ने अनुरोध गर्दछ।
ईश्वरीय दिमागले मानिसका सम्पूर्ण आज्ञाकारिता, स्नेह र शक्तिको माग गर्दछ। कुनै पनि कम वफादारीको लागि कुनै आरक्षण गरिएको छैन। सत्यको आज्ञापालनले मानिसलाई शक्ति र शक्ति दिन्छ। त्रुटिमा पेस गर्दा शक्ति गुमाउँछ।
यस विज्ञान बाहिर सबै परिवर्तनीय छ; तर अमर मानिस, आफ्नो अस्तित्वको ईश्वरीय सिद्धान्त अनुरुप, परमेश्वर, न पाप, पीडित, न मर्दछ। हाम्रो तीर्थयात्राका दिनहरू घट्दै जानुको सट्टा गुणा हुनेछ, जब परमेश्वरको राज्य पृथ्वीमा आउँछ; किनकि साँचो मार्गले मृत्युको सट्टा जीवनतर्फ डो .्याउँछ, र पार्थिव अनुभवले गल्तीको अन्तिमता र सत्यको असीम क्षमता प्रकट गर्दछ, जसमा परमेश्वरले मानिसलाई सारा पृथ्वीमाथि प्रभुत्व दिनुहुन्छ।
जहिले पनि र सबै परिस्थितिमा, राम्रोसँग खराबीलाई जित। आफैलाई चिन्नुहोस्, र परमेश्वरले ज्ञान र अवसर प्रदान गर्नुहुनेछ खराबमाथि विजयको लागि। प्रेमको झुण्डमा ढाकिएको, मानव घृणा तपाईं सम्म पुग्न सक्दैन, मानव घृणा तपाईं सम्म पुग्न सक्दैन।
जब पुरानो हुर्किरहेको छ, तपाईं नयाँ लगाउन डराउनु हुँदैन। तपाईंको अग्रगण्य कोर्सले ईर्ष्या उत्पन्न गर्दछ, तर यसले सम्मानलाई पनि आकर्षित गर्दछ। जब त्रुटि तपाइँको सामना गर्दछ, हप्काउने वा त्रुटिलाई नष्ट गर्ने विवरणलाई रोक्नुहोस्। अनैतिक वातावरण कहिले पनि सास नफर्काउन्जेल, यसलाई शुद्ध पार्न कोशिस नगरेसम्म।
स्थिर, राम्रो, र सत्यको लागि स्थिर सोच राख्नुहोस्, र तपाईं यसलाई आफ्नो अनुभवमा उनीहरूको विचारहरूमा उनीहरूको पेसामा ल्याउनुहुनेछ।
मानिस आफूले खोजेको दिशामा हिँड्छ, र जहाँ उसको खजाना छ, त्यहाँ उसको हृदय पनि हुनेछ। यदि हाम्रो आशा र स्नेह आध्यात्मिक छन्, तिनीहरू तलबाट आउँदछ, तलबाट होइन, र तिनीहरूले आत्माको फलहरू पुरानो रूपमा बोक्छन्।
यदि ती चेला आध्यात्मिक तवरमा अघि बढिरहेका छ भने, ऊ भित्र छिर्न प्रयास गरिरहेको छ। उहाँ लगातार भौतिक ज्ञानबाट टाढा रहनुहुन्छ, र आत्माको अविनाशी चीजहरू तिर हेर्नुहुन्छ। यदि इमानदार छ भने, ऊ शुरूदेखि नै व्यग्र रहनेछ, र प्रत्येक दिन एक थोरै दिनको दिशातर्फ बढ्नेछ, अन्त सम्म उसले अन्त्यसम्म उसले आफ्नो आनन्द आनन्दसाथ पूरा गर्दछ।
सही र गलत, सत्य र त्रुटि, विद्यार्थीहरूको दिमागमा कलह हुनेछ जब सम्म विजय अजेय सत्यको पक्षमा टुंगिन्छ।